သစ်သားမီးဖို၏ပူနွေးသောနေရာတွင်မီးလောင်လွယ်သောသို့မဟုတ်မီးဖိုချောင်တွင်ရှေ့တွင်သွေ့ခြောက်နေသဖြင့်သင်သည်ရာစုနှစ်များတစ်လျှောက်နှစ်သိမ့်မှုနှင့်ပျော်မွေ့မှုဓလေ့ထုံးစံတွင်ပါဝင်နေသည်။ သင်စဉ်းစားရမည့်နောက်ဆုံးအချက်မှာသင်၏မီးဖို၏အခြေအနေဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုဆောင်းရာသီမီးများမမီးမထိုးမီ၎င်းကိုသင်မစဉ်းစားပါကသင်၏ပျော်ရွှင်မှုသည်အလွန်တိုတောင်းပေမည်။ အဘယ်ကြောင့်? ညစ်ပတ်သောမီးခိုးခေါင်းတိုင်များသည်အဆောက်အအုံများကိုဖျက်ဆီးခြင်း၊ နေအိမ်များကိုဖျက်ဆီးခြင်း၊
မီးခိုးခေါင်းတိုင်များသည်ပြင်းထန်စွာလောင်ကျွမ်းသွားနိုင်သည်။ ဆူညံမှုနှင့်သိသိသာသာကြီးမားသောအိမ်နီးချင်းများသို့မဟုတ်လမ်းသွားလမ်းလာများကသိရှိနိုင်သည်။ အိမ်ပိုင်ရှင်များက၎င်းတို့သည်ကုန်တင်ရထားတစ်စင်းသို့မဟုတ်ပျံနိမ့်သောလေယာဉ်ပျံတစ်စင်းကိုသတိပေးသည့်အသံနိမ့်အသံမြည်သံကြောင့်တုန်လှုပ်နေသည်ဟုအစီရင်ခံကြသည်။ မီးခိုးများသို့မဟုတ်သိပ်သည်းသောမီးခိုးများသည်မီးဖို၏ထိပ်ဘက်မှလည်းပစ်ခတ်နိုင်သည်။ သို့သော်ထိုမီးခိုးများသည်သင်သိသောမီးခိုးခေါင်းတိုင်သာဖြစ်သည်။ ဖြည်းဖြည်းလောင်သောမီးဖိုထဲတွင်မီးလောင်ကျွမ်းမှုသည်လေအလုံအလောက်မရရှိခြင်းသို့မဟုတ်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်လောင်စာဆီအလုံအလောက်မရရှိခြင်း။ သို့သော်သူတို့ရောက်ရှိနေသောအပူချိန်များသည်အလွန်မြင့်မားပြီးသူတို့၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်ဝမ်းကွဲများကဲ့သို့မီးခိုးခေါင်းတိုင်နှင့်အိမ်၏အနီးအနားရှိလောင်ကျွမ်းသောနေရာများကိုပျက်စီးစေသလောက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သို့ရာတွင်သင့်လျော်သောမီးခိုးခေါင်းတိုင်စနစ်ဖြင့်မီးခိုးခေါင်းတိုင်များကိုလုံးဝကာကွယ်နိုင်သည်။
မီးဖိုများနှင့်သစ်သားမီးဖိုများသည်အိမ်များအတွက်အပူပေးသည့်အခါထင်းဖြင့်မီးလောင်ကျွမ်းမှုကိုလုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သူတို့ကိုအစေခံသောမီးခိုးခေါင်းတိုင်များသည်လောင်ကျွမ်းသောဘေးထွက်ပစ္စည်းများ – ထင်းကိုလောင်ကျွမ်းသောအခါစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုထုတ်ပစ်ရန်အလုပ်ရှိသည်။
ဤအရာဝတ္ထုများသည်မီးဖိုသို့မဟုတ်သစ်သားမီးဖိုမှထွက်သွားပြီးအေးသောမီးဖိုထဲသို့စီးဝင်သောအခါငွေ့ရည်ဖွဲ့ထွက်လာသည်။ မီးခိုးငွေ့၏အတွင်းပိုင်းနံရံတွင်ကပ်ထားသောကျန်ရှိသောအရာများကို creosote ဟုခေါ်သည်။ Creosote သည်အနက်ရောင်သို့မဟုတ်အညိုရောင်ဖြစ်ပြီးအသားအရေနှင့်စိုပြေသော၊ ကတ္တရာစေး၊ drippy နှင့်စေးကပ်သောသို့မဟုတ်တောက်ပ။ မာကျောနိုင်သည်။ များသောအားဖြင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးသည်မီးခိုးခေါင်းတိုင်တစ်ခုတည်းတွင်ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်။
မည်သည့်ပုံစံပင်ဖြစ်ပါစေ creosote သည်အလွန်လောင်ကျွမ်းစေပါသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်လုံလောက်သောပမာဏနှင့်စုဆောင်းပြီးမီးဖိုထဲရှိမီးကိုလောင်ကျွမ်းပါကရလဒ်သည်မီးဖိုဆောင်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်ပမာဏမျှမီးမရှို့နိုင်သော်လည်း creosote သည်ရှည်လျား။ ပူသော၊ အဖျက်စွမ်းအားရှိသောမီးခိုးမြူများကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်လုံလောက်သောပမာဏများစုဆောင်းသောအခါလှည်းများသည်စိုးရိမ်ဖွယ်ဖြစ်သည်။
အချို့သောအခြေအနေများက creosote တည်ဆောက်မှုကိုအားပေးသည်။ ကန့်သတ်ထားသောလေထုထောက်ပံ့မှု၊ unseasoned သစ်သားနှင့်သာမန်မီးခိုးတိုင်များ၏အပူချိန်ထက်အေးသောအရာအားလုံးသည်မီးခိုးခေါင်းတိုင်များပေါ်တွင် creosote ၏တည်ဆောက်မှုကိုအရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။
မီးဖိုများရှိလေထုကိုပိတ်ထားသောဖန်တံခါးများဖြင့်ပိတ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်မီးခိုးငွေ့ထဲသို့မီးခိုးများလျင်မြန်စွာရွေ့လျားနိုင်စေရန်ကျယ်ပြန့်သော damper ကိုဖွင့်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်း (မီးခိုးထွက်နေသည့်မီးခိုးငွေ့၏နေထိုင်မှုအချိန်ကြာလေလေ creosote သည် ပို၍ ဖြစ်နိုင်သည်) ပုံစံ) ။ ထင်းမီးဖို၏လေကိုထောက်ပံ့မှုသည်မီးဖို damper (သို့) လေ ၀ င်လေထွက်များကိုမကြာမီနှင့်အလွန်အကျွံပိတ်ခြင်းအားဖြင့်၊ လေအားလှုပ်ရှားမှုကိုကန့်သတ်ရန် stovepipe damper ကိုသုံးခြင်းဖြင့်အကန့်အသတ်ရှိသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အစောပိုင်းသစ်ပင်များ၏ဆဲလ်များအတွင်းရှိပိတ်မိနေသောရေကိုမောင်းထုတ်ရန်အတွက်စွမ်းအင်အမြောက်အများကိုအသုံးပြုသောကြောင့်အစိမ်းရောင်ရှိသောသစ်သားသည်မီးခိုးထွက်လာသည့်အခါအပူရှိန်ကိုအအေးခံစေသည်။ Cooler air သည်လေပူကဲ့သို့လျင်မြန်စွာမြင့်တက်ခြင်းမရှိသောကြောင့် flue တွင်အချိန်ပိုကုန်သည်။
Cool Flue အပူချိန်
သစ်သားမီးဖိုများတွင်ထုပ်ပိုးထားသောသစ်သားများ (ကြီးမားသောမီးလောင်လွယ်သောမီးများနှင့်ရှစ်သို့မဟုတ် ၁၀ နာရီမီးလောင်ကျွမ်းသည့်အချိန်များ) သည် creosote တည်ဆောက်မှုကိုအထောက်အကူပြုသည်။ လောင်ကျွမ်းသောလောင်ကျွမ်းသောလောင်ကျွမ်းသောထုတ်ကုန်များ၏ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုသည်အပြင်ဘက်မီးဖိုထဲတွင်လျှင်မြန်စွာဖြစ်ပေါ်သည်၊ ဥပမာအားဖြင့်အိမ်တစ်အိမ်၏အလယ်တွင်ဖြတ်သန်းသွားသောမီးခိုးပေါက်များနှင့်ဒြပ်စင်များအပေါ်သို့သက်ရောက်သောမီးခိုးတိုင်များ၌ပိုမိုလျှင်မြန်စွာဖြစ်ပေါ်သည်။
ကျောက်တုံးများမီးခိုးခေါင်းတိုင်များတွင်မီးခိုးခေါင်းတိုင်ပေါ်ပေါက်လာသောအခါ – မီးများသည်ဟောင်းနွမ်းခြင်းမရှိသောပုံစံရှိခြင်းလားသို့မဟုတ်လက်ရှိဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကုဒ်များနှင့်ကိုက်ညီခြင်းရှိမရှိ – သူတို့မီးရှို့သောအပူချိန်မြင့်မားခြင်း (၂၀၀၀ ံခန့်တွင် F) သည်မော်တာများ၊ အက်ကွဲသောကြွေပြားများကိုအရည်ပျော်စေနိုင်သည်။ အပြင်ဘက်ပန်းရံပစ္စည်းများကိုကူရှင်ပြိုကျစေပြီးပျက်စီးစေနိုင်သည်။ များသောအားဖြင့်ကြွေပြားများအက်ကွဲခြင်းနှင့်မော်တာများနေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်းကြောင့်အိမ်၏မီးလောင်လွယ်သောသစ်သားဘောင်အတွင်းသို့မီးတောက်များရောက်ရှိရန်လမ်းကြောင်းပေးသည်။ မီးခိုးခေါင်းတိုင်တစ်ခုသည်အိမ်ကိုထိခိုက်မည်မဟုတ်သော်လည်းတစ်စက္ကန့်သည်မီးလောင်နိုင်သည်။ အနီးအနားရှိလောင်ကျွမ်းခြင်းကိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်ရန်အတွက်လုံလောက်သောအပူသည်ပြည့်စုံကောင်းမွန်သောမီးခေါင်းတိုင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်နိုင်သည်။
pre- လုပ်ပြီးစက်ရုံ -built သတ္တုမီးခိုးတိုင်များ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတရားစီရင်မှုအများစုတွင်တပ်ဆင်ရန်ထင်းမီးဖိုများသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်ထားသောသတ္တုမီးဖိုများကိုထုတ်ယူရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောစက်ရုံတည်ဆောက်ထားသောသတ္တုမီးခိုးတိုင်များအား Underwriter’s Laboratories (U.L. ) မှသတ်မှတ်ထားသောအထူးစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရမည်။ မီးဘေးမီးဘေးအခြေအနေတွင်ဤစနစ်များကိုပျက်စီးစေနိုင်ဆဲဖြစ်ပြီးများသောအားဖြင့်အတွင်းပိုင်းကန့်လန့်ပေါ်ရှိအပေါက်များသို့မဟုတ်အဆက်အဆံများပုံစံမျိုးဖြစ်သည်။ စက်ရုံများမှကြိုတင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံတည်ဆောက်ထားသောသတ္တုမီးခိုးတိုင်များသည်မီးဘေးမီးကြောင့်ပျက်စီးခြင်းဖြစ်ရာ၎င်းတို့ကိုအသုံးမပြုသင့်တော့ဘဲအစားထိုးရမည်။
သငျသညျဂရုစိုက်ပါလျှင်မီးခိုးခေါင်းတိုင်ဖြစ်ပျက်စရာမလိုပါ။ သစ်တောများကိုသာအသုံးပြုခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။ ဤအမှု၌ခြောက်သွေ့ခြင်းသည်သစ်သားထက်မာကျောသောသစ်သားထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ ထို့အပြင် ပိုမို၍ အပြည့်အဝလောင်ကျွမ်း။ မီးခိုးလျော့နည်းစေသောသေးငယ်သောပိုမိုပူပြင်းသည့်မီးများတည်ဆောက်ပါ။ သင်၏မီးဖို၌ကတ်ထူပြားများ၊ စက္ကူများ၊ အမှိုက်များ၊ နောက်ဆုံးတွင်မီးခိုးခေါင်းတိုင်ကိုပုံမှန်စစ်ဆေးပြီးသန့်ရှင်းစေပါ။
သန့်ရှင်းသောမီးတိုင်များသည်မီးမလောင်ပါ။ CSIA Certified Chimney Sweep သည်သင်၏ solid fuel venting system ကိုနှစ်စဉ်စစ်ဆေးပြီးလိုအပ်ပါက၎င်းကိုသန့်ရှင်းအောင်ပြင်ဆင်ပါ။ သင်၏သိမ်းဆည်းမှုသည်သင်၏မီးဖိုသို့မဟုတ်မီးဖိုကိုလည်းသင်မည်သို့အသုံးပြုသည်အပေါ် မူတည်၍ အခြားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များရှိနိုင်သည်။ CSIA ကသင့်အားအသိအမှတ်ပြုသောမီးခိုးတိုင်များကိုရှင်းလင်းရန်သင့်အားအကြံပေးသည်။ ၎င်းတို့သည်မီးခိုးခေါင်းတိုင်နှင့်လေဝင်လေထွက်စနစ်များ၏ရှုပ်ထွေးမှုများကိုသူတို့၏ပုံမှန်နားလည်မှုကိုစစ်ဆေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သက်တံ့ရောင်အရောင်ခြယ်ထားသော “ Puffy” creosote သည် creosote ၏ပုံမှန်ပုံစံထက်ကျော်လွန်သည်
အက်သို့မဟုတ်ဖြိုချ flue tiles, ဒါမှမဟုတ်ကြီးမားသောတုံးပျောက်ဆုံးနေအုပ်ကြွပ်
အရောင်ပြောင်းသွားပြီးပုံပျက်နေသောမိုး ဦး ထုပ်
ခေါင်မိုးသို့မဟုတ်မြေပြင်ပေါ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့ Creosote အလွှာနှင့်အပိုင်းပိုင်း
အပူ creosote မှပျက်စီးမျက်နှာကြက်ပစ္စည်း
အကယ်၍ မီးငွေ့မီးပေါက်နေသည်ဟုသင်ထင်လျှင်၊ ကျွမ်းကျင်သောအကဲဖြတ်မှုတစ်ခုအတွက် CSIA အသိအမှတ်ပြုမီးဖိုချောင်မောင်းကိုခေါ်ပါ။ အကယ်၍ သင်၏သံသယများကိုအတည်ပြုပါကအသိအမှတ်ပြုအသိပေးချက်သည်စနစ်အားဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံနှုန်းများနှင့်မည်သို့ပြန်လည်ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်းအကြံပြုချက်များပေးနိုင်လိမ့်မည်။ အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ သင့်အား flue tiles အနည်းငယ်အစားထိုးရန်လိုအပ်ပြီး relining system တစ်ခုသို့မဟုတ် chimney တစ်ခုလုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအခြေအနေထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပြီး၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖြေရှင်းချက် dictate ပါလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ သင်သည်မိမိကိုယ်ကိုအန္တရာယ်မပေးနိုင်ပါကသင်၏အိမ်ကိုကယ်တင်ရန်နောက်ထပ်အဆင့်များပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်အိမ်များကိုအစားထိုးနိုင်ကြောင်းသတိရပါ။ ဘဝတွေမဟုတ်ဘူး။
မီးဘေးမီးသတ်ဆေးဘူးကိုမီးဖိုသို့မဟုတ်ထင်းမီးဖိုထဲသို့ထည့်ပြီးရှိပါကဖန်တံခါးများကိုပိတ်ပါ။ သစ်သားမီးဖိုပေါ်ရှိလေ ၀ င်ပေါက်များကိုလည်းပိတ်ထားပါ။ သင်အပြင်ဘက်ရောက်သောအခါဥယျာဉ်မှူးတစ် ဦး ကို သုံး၍ အိမ်ခေါင်မိုးကိုဖြန်းရန် (မီးခိုးခေါင်းတိုင်မဟုတ်) မီးကို အသုံးပြု၍ ကျန်အဆောက်အအုံများသို့ပြန့်နှံ့သွားမည်မဟုတ်ပါ။
ပြီးဆုံးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုစစ်ဆေးရန် CSIA အသိအမှတ်ပြုမီးခိုးမြူကိုခေါ်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်မီးဘေးမီးဘေးပျက်စီးခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုအိမ်ပိုင်ရှင်အာမခံပေါ်လစီများဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။